စီရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် အိုးလ်ထရက်ဖို့ဒ်အပြန်လမ်း
အိုးလ်ထရက်ဖို့ဒ်ကို တစ်ကျော့ပြန် ခြေချမယ့် စီရော်နယ်လ်ဒို Cristiano Ronaldo
31 Aug 2018 . 12:02 PM
ဒီနေ့ (အင်္ဂါ)မှာ ချန်ပီယံလိဂ်ပွဲကြီးပွဲကောင်းတွေ အများကြီးရှိနေပြီး အဲဒီထဲကမှ စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးက အိုးလ်ထရက်ဖို့ဒ်မြေကို တစ်ကျော့ပြန်လာမယ့် စီရော်နယ်လ်ဒို Cristiano Ronaldo ရဲ့ မန်ချက်စတာ အပြန်လမ်းပါပဲ။
စီရော်နယ်လ်ဒိုဆိုတာက အရင်ဂန္ထ၀င်ကစားသမား ဒေးဗစ်ဘက်ခမ် David Beckham လို မန်ယူပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော် ကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်ပြီး အသင်းကို ပြန်လာဖို့ မန်ယူပရိသတ်တွေက အမြဲလိုလို တောင်းဆိုခဲ့ကြဖူးတယ်။ ရီးယဲလ်နဲ့ အနာဂတ် မသေချာဖြစ်နေချိန်တုန်းက မန်ယူပရိသတ်တွေဟာ မန်ချက်စတာမြေကို စီရော်နယ်လ်ဒို ခြေပြန်ချဖို့ မျှော်လင့်ခဲ့ကြပေမယ့် သူကတော့ တူရင်မြို့ရဲ့ ရင်ခွင့်ကိုသာ ခိုလှုံဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆိုရင် စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ ဂျူဗင်တပ်စ်ကစားသမားဘ၀နဲ့ အိုးလ်ထရက်ဖို့ဒ်မြေကို တစ်ကျော့ပြန် လာတော့မှာပါ။ အိုးလ်ထရက်ဖို့ဒ်ကို ပြိုင်ဘက်အဖြစ် စီရော်နယ်လ်ဒို ပြန်လာတာက ဒါ ပထမဆုံးအကြိမ်တော့ မဟုတ်ဘူး။
၂၀၁၂-၁၃ ရာသီ ချန်ပီယံလိဂ် ရှုံးထွက်(၁၆)သင်းအဆင့်တုန်းက ရီးယဲလ်အသင်းနဲ့အတူ မန်ချက်စတာမြေကို ချီတက်ခဲ့သလို အသင်းဟောင်းဘက်ကို ဂိုးပါသွင်းခဲ့သေးတယ်။ စီရော်နယ်လ်ဒိုဆိုတာကလည်း မန်ယူနဲ့တွေ့ရင် အမြဲလိုလို ဒုက္ခပေးလေ့ရှိသူပါပဲ။ ၂၀၀၃ ခုနှစ်တုန်းက စပို့တင်းလစ္စဘွန်းနဲ့ မန်ယူတို့ရဲ့ ခြေစမ်းပွဲကို ပရိသတ်တွေ အမှတ်ရနေဆဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီတုန်းက ချာတိတ်လေး စီရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့ ထိုးဖောက် မွှေနှောက်မှုတွေကြောင့် မန်ယူကစားသမားတွေ အရူးမီးဝိုင်းဖြစ်ခဲ့ပြီး နောက်ခံလူ အိုရှေး O’Shea ဆိုရင် ခေါင်းမူးလာလို့ ဆေးကုသမှု ခံရတဲ့အထိဖြစ်ခဲ့ရတယ်။
စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ ရီးယဲလ်ကစားသမားဘ၀မှာ မန်ယူအသင်းနဲ့ (၃)ကြိမ် ဆုံတွေ့ခဲ့ပြီး (၂)ပွဲ ဂိုးသွင်းခဲ့တယ်။ အခု တစ်ကြိမ်ဆုံတွေ့မှုမှာရော မန်ယူကို စီရော်နယ်လ်ဒို ဒုက္ခပေးဦးမှာလား။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ အိုးလ်ထရက်ဖို့ဒ်မှာ ဂျူဗင်တပ်စ်နဲ့ကစားမယ့်ပွဲကျရင် စီရော်နယ်လ်ဒိုကို မန်ယူပရိသတ်တွေက ပြိုင်ဘက်လို့ သဘောထားမှာ မဟုတ်ဘဲ သောင်းသောင်းဖြဖြ ကြိုဆိုကြမှာ အမှန်ပဲဖြစ်ပါတော့တယ် . . .
အိုးလျထရကျဖို့ဒျကို တဈကြော့ပွနျ ခွခေမြယျ့ စီရျောနယျလျဒို Cristiano Ronaldo
ဒီနေ့ (အင်ျဂါ)မှာ ခနျြပီယံလိဂျပှဲကွီးပှဲကောငျးတှေ အမြားကွီးရှိနပွေီး အဲဒီထဲကမှ စိတျဝငျစားစရာအကောငျးဆုံးက အိုးလျထရကျဖို့ဒျမွကေို တဈကြော့ပွနျလာမယျ့ စီရျောနယျလျဒို Cristiano Ronaldo ရဲ့ မနျခကျြစတာ အပွနျလမျးပါပဲ။
စီရျောနယျလျဒိုဆိုတာက အရငျဂန်ထဝငျကစားသမား ဒေးဗဈဘကျခမျ David Beckham လို မနျယူပရိသတျတှရေဲ့ အခဈြတျော ကစားသမားတဈဦးဖွဈပွီး အသငျးကို ပွနျလာဖို့ မနျယူပရိသတျတှကေ အမွဲလိုလို တောငျးဆိုခဲ့ကွဖူးတယျ။ ရီးယဲလျနဲ့ အနာဂတျ မသခြောဖွဈနခြေိနျတုနျးက မနျယူပရိသတျတှဟော မနျခကျြစတာမွကေို စီရျောနယျလျဒို ခွပွေနျခဖြို့ မြှျောလငျ့ခဲ့ကွပမေယျ့ သူကတော့ တူရငျမွို့ရဲ့ ရငျခှငျ့ကိုသာ ခိုလှုံဖို့ ဆုံးဖွတျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ အခုဆိုရငျ စီရျောနယျလျဒိုဟာ ဂြူဗငျတပျဈကစားသမားဘဝနဲ့ အိုးလျထရကျဖို့ဒျမွကေို တဈကြော့ပွနျ လာတော့မှာပါ။ အိုးလျထရကျဖို့ဒျကို ပွိုငျဘကျအဖွဈ စီရျောနယျလျဒို ပွနျလာတာက ဒါ ပထမဆုံးအကွိမျတော့ မဟုတျဘူး။
၂၀၁၂-၁၃ ရာသီ ခနျြပီယံလိဂျ ရှုံးထှကျ(၁၆)သငျးအဆငျ့တုနျးက ရီးယဲလျအသငျးနဲ့အတူ မနျခကျြစတာမွကေို ခြီတကျခဲ့သလို အသငျးဟောငျးဘကျကို ဂိုးပါသှငျးခဲ့သေးတယျ။ စီရျောနယျလျဒိုဆိုတာကလညျး မနျယူနဲ့တှရေ့ငျ အမွဲလိုလို ဒုက်ခပေးလရှေိ့သူပါပဲ။ ၂၀၀၃ ခုနှဈတုနျးက စပို့တငျးလစ်စဘှနျးနဲ့ မနျယူတို့ရဲ့ ခွစေမျးပှဲကို ပရိသတျတှေ အမှတျရနဆေဲဖွဈပါလိမျ့မယျ။ အဲဒီတုနျးက ခြာတိတျလေး စီရျောနယျလျဒိုရဲ့ ထိုးဖောကျ မှနှေောကျမှုတှကွေောငျ့ မနျယူကစားသမားတှေ အရူးမီးဝိုငျးဖွဈခဲ့ပွီး နောကျခံလူ အိုရှေး O’Shea ဆိုရငျ ခေါငျးမူးလာလို့ ဆေးကုသမှု ခံရတဲ့အထိဖွဈခဲ့ရတယျ။
စီရျောနယျလျဒိုဟာ ရီးယဲလျကစားသမားဘဝမှာ မနျယူအသငျးနဲ့ (၃)ကွိမျ ဆုံတှခေဲ့ပွီး (၂)ပှဲ ဂိုးသှငျးခဲ့တယျ။ အခု တဈကွိမျဆုံတှမှေု့မှာရော မနျယူကို စီရျောနယျလျဒို ဒုက်ခပေးဦးမှာလား။
ဘာပဲဖွဈဖွဈပါ အိုးလျထရကျဖို့ဒျမှာ ဂြူဗငျတပျဈနဲ့ကစားမယျ့ပှဲကရြငျ စီရျောနယျလျဒိုကို မနျယူပရိသတျတှကေ ပွိုငျဘကျလို့ သဘောထားမှာ မဟုတျဘဲ သောငျးသောငျးဖွဖွ ကွိုဆိုကွမှာ အမှနျပဲဖွဈပါတော့တယျ . . .